Wholesale Vortex kuyerera mita Mugadziri uye Mutengesi | ANGJI
1.LCD dot matrix kuratidza, Instant kuyerera chiyero uye yakazara kuyerera uye tembiricha uye kumanikidza kukosha kunogona kuratidzwa panguva imwe chete neakakwira-kupenya backlight, yakapusa uye yakajeka kushanda.
2.Iwe hunyanzvi hwekuongorora hunyanzvi hunogona kuvandudza zvakanyanya chiratidzo chekuona uye kudzora kupindirana kunokonzerwa nepombi yekuzungunuka.
3.K-Factor linearity: XJWJ inopa 1 kusvika gumi mapoinzi k-Factor kururamisa.
4.Kutora iyo inotungamira chaiyo-nguva yekuwana kutonga uye inowoneka matekinoroji ekutsvagisa iwo masystem ekukanganisa anokonzerwa nekudengenyeka uye kumanikidza kushanduka zvakadzvinyirirwa.
5.Easy yekushandisa: Ingo seta akati wandei ma parameter nesoftware kana kiyi yekushandisa, Inogona kushandiswa kuyera gasi, mvura kana mweya weakasiyana chiridzwa caliber.
6.Iyo 16 bit microcomputer chip ine zvakanakira kubatanidzwa kwepamusoro, diki saizi, kuita kwakanaka uye kushanda kwakasimba kwemuchina wese.Hapana michina inofambiswa zvikamu, yakagadzikana uye yakavimbika, hupenyu hwakareba, kushanda kwenguva refu pasina yakakosha yekuchengetedza.
7.Intelligent kuyerera mita kuyerera probe, microprocessor, kumanikidza uye tembiricha sensor (Pt100or Pt1000) mune imwe, tora yakavakirwa-mukati mubatanidzwa, ita iyo chimiro iwedzere kuumbana, inogona kuyerera, kumanikidza uye tembiricha kuyera kwemvura zvakananga, uye chaiyo-nguva otomatiki kuteedzera muripo uye kumanikidza chinhu kururamisa.
8.Uye neEEPROM tekinoroji, iyo paramende yekumisikidza iri nyore uye inogona kuchengetedzwa zvachose, uye yakarebesa nhoroondo dhata inogona kuchengetedzwa kwegore rimwe.
Iyo ine yega yekutarisa basa, yakapfuma yekuzviongorora ruzivo, zviri nyore kumushandisi kugadzirisa uye kugadzirisa dambudziko.
10.nezvimiririra pasiwedhi masetingi, anti-kuba basa rakavimbika, parameter, yakazara clearance uye calibration inogona kumisikidzwa pamatanho akasiyana epassword, mushandisi-inoshamwaridzika manejimendi.
11.Iye inoshandura inogona kuburitsa frequency pulse, 4 ~ 20mA analog chiratidzo, uye ine RS485 interface, inogona kuve yakabatana yakanangana neiyo microcomputer
12.Mushanduri anoratidza kutenderera kwe360 degree, uye zviri nyore kuisa nekushandisa
13.Iyo yekushandisa simba yemuchina wese yakaderera, iyo yekunze magetsi magetsi uye bhatiri magetsi magetsi anogona kupihwa, uye iyo magetsi magetsi mode inogona kuchinjika otomatiki.
14.Multi epanyama parameter alarm kuburitsa, iyo inogona kusarudzwa nevashandisi, kuburitsa switch switch.
A. magetsi: 24VDC + 15%, ye4 ~ 20mA kuburitsa, kupomba kubuda, alarm kuburitsa, RS-485 nezvimwe.
Simba rekushandisa rese muchina
A. kwokunze magetsi: <2W
Pulse nzira yekubuda
A. sensor pulse signal, pulse signal kuyerera sensor, yakasarudzika gudzazwi yakaburitsa, yakakwira mwero inopfuura 20V uye yakaderera nhanho isingasviki 1V; frequency kuburitsa, 0-5000HZ kuburitsa, inoenderana pakarepo kuyerera, iyi paramende inogona kuseta bhatani
B. yakaenzana yekupomba chiratidzo, yakasarudzika gudzazwi yakaburitsa, yakakwira inodarika 20V uye yakaderera nhanho yakaderera kana yakaenzana ne1V, iyo vhoriyamu vhoriyamu inogona kumisirwa pachinzvimbo chekupomba renji: 0.0001m3 ~ 100m3.
Cherekedza: sarudza iyo yakabuda yakaenzana kupomba chiratidzo frequency ishoma pane kana yakaenzana ne1000Hz; Inogona kufananidzwa nemagetsi vharuvhu yakaitwa neIC kadhi yekubhadharisa system, yakakwira mwero kuburitsa chiratidzo amplitude yakakura kudarika 2.8V, yakaderera nhanho amplitude isingasviki 0.2V
RS-485 kutaurirana (photoelectric kusarudzika)
uchishandisa RS-485 interface, inogona kuve yakanangana neyakagamuchirwa komputa kana iwo maviri ari kure tafura yekuratidzira, yepakati tembiricha, kumanikidza uye yakajairwa vhoriyamu kuyerera uye yakaenzana netembiricha uye kumanikidza muripo mushure mehuwandu hwehuwandu
4 ~ 20mA standard yazvino chiratidzo (fotoelectric kusarudzika) uye yakajairwa vhoriyamu yakaenzana kune inoenderana 4mA, 0 m3 / h, 20 mA inoenderana neepamusoro mwero vhoriyamu (kukosha kwacho kunogona kuiswa padanho menyu), standard: waya mbiri kana matatu waya, iyo flowmeter inogona otomatiki kuziva iyo yakaiswa module maererano neyazvino chaiyo uye inobuda
Chengetedza alarm chiratidzo chinobuda
A. alarm chiratidzo (LP): fotoelectric kusarudzika, yakakwira alamu, alarm yekumisikidza inogona kuiswa, 12V ~ + 24V inoshanda voltage, yakanyanya kutakura ikozvino
B. yambiro chiratidzo (UP): fotoelectric yekuzviparadzanisa, yakakwira nhanho alarm, alamu nhanho inogona kusetwa, 12V ~ + 24V inoshanda voltage, yakakwira mutoro wazvino we50mA
C. bvisa vharuvhu alarm alarm (IC kadhi inodzora ine BC kumagumo): zvine musoro gedhi kuburitsa wedunhu, zvakajairwa kuburitsa pasi, amplitude ishoma pane kana yakaenzana ne0.2V; iyo alarm yekuburitsa nhanho, amplitude yakakura kudarika 2.8V, mutoro wekudzivirira wakakura kupfuura kana kuenzana ne100k
D. bhatiri undervoltage alarm kuburitsa (IC kadhi inodzora ine BL magumo): zvine musoro gedhi kuburitsa wedunhu, zvakajairika kuburitsa yakaderera, amplitude ishoma pane kana yakaenzana ne0.2V; iyo alarm yekuburitsa nhanho, amplitude yakakura kudarika 2.8V, mutoro wekudzivirira wakakura kupfuura kana kuenzana ne100k
3-waya Pulse kuburitsa, Bhatiri-inofambiswa, Kumusoro uye kwakadzika muganho aramu kuburitsa, IC kadhi controller interface
2-tambo 4 ~ 20mA kubuda; 2-waya Pulse kubuda, Bhatiri-inofambiswa, IC kadhi inodzora interface
2-tambo 4 ~ 20mA kubuda; 2-waya ine RS485,2-waya Pulse yakabuda; Bhatiri-inofambiswa, IC kadhi inodzora interface
3-tambo 4 ~ 20mA kuburitsa, 3-waya Pulse kuburitsa, Bhatiri-inofambiswa, IC kadhi controller interface, Kumusoro uye kwakadzika muganho alarm kuburitsa
4-waya 4 ~ 20mA kuburitsa, 3-waya Pulse kubuda, Bhatiri-inofambiswa, Yekumusoro uye yakaderera muganho aramu kuburitsa, IC kadhi mutungamiriri interface
3-waya ine RS485,3-waya Pulse yakabuda, Bhatiri-inofambiswa, Kumusoro uye kwakadzika muganho alarm kuburitsa, IC kadhi mutungamiriri interface
3-tambo ine RS485,3-waya 4 ~ 20mA kuburitsa, 3-waya Pulse kuburitsa, Bhatiri-inofambiswa, Yekumusoro uye yakaderera muganho alarm kuburitsa, IC kadhi mutungamiriri interface
4-waya ine RS485, 4-waya 4 ~ 20mA kuburitsa, 3-waya Pulse kuburitsa, Bhatiri-inofambiswa, Kumusoro uye kwakadzika muganho alarm kuburitsa, IC kadhi mutungamiriri interface
Pashure: Turbine inoyerera
Vortex Flowmeter Mutengo